Ogaden News Agency (ONA) – Xasuuq Loogeystay Qowmiyada Xamar (Hamar) ee ku hoosnool Guemysiga Ethiopia
Xasuuq Loogeystay Qowmiyada Xamar (Hamar) ee ku hoosnool Guemysiga Ethiopia
Posted by ONA Admin	/ June 5, 2015
Daggaalka ayaa ka dhex qarxay ciidamada gumeysiga Ethiopia iyo muwaadiniinta Xama (Hamar) kadib markii ciidanka woyanaha Ethiopia ay kufsadeen gabadh Xamar ah. Arrintaas waxaa ka gadooday shacabka Xamarta oo hubqaatay kadibna isku dayay inay iska caabiyaan ciidamada nacabka gumeysiga Ethiopia.
Gumeysiga Ethiopia oo aad u hubeysan ayaa xasuuq u geystay shacabka Xamar (Hamar) oo ah shacab ree guuraa ah oo ku nool hareeraha wabiga Omo. Shacabkan oo ah shacab dhaqameed u nool sidii waayadii hore bani aadamku u noolaan jiray waxay kamidyihiin dhaqamada Qaramada midoobay illaalada u fidiyaan ee xeerka UN qorayo in la dhowro dhaqamada noocaas ah dadka heysta oo ah dad badanaa xaquuqdooda lagu tunto isna difaaci karin lana socon xadaarada adduunka ka jirta waqgtigan.
Shacabkan aan isdifaaci akrin ee Xamar (Hamar) waxaa la sheegay in ciidamada Ethiopia ay ku weerareen hubka noocyada uu kamidka yahay baasukaha waxyaalaha qaraxa xoogan leh, hubka culus ayaa keenay in dad tiro ahi ku dhintaan.
Hamar waxay kamidyihiin qowmiyadaha tirada badan ee ku nool agagaarka wabiga Omo halkaas oo gumeysiga Ethiopia uu baro kicin kusameeyay qowmiyadihii daggana oo idil.